PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-29 - OweDowns akeneme ngokubolekiswa kwakhe
OweDowns akeneme ngokubolekiswa kwakhe
UMGADLI weMamelodi Sundowns, uBongi Ntuli, okuthe nangale sizini waphinde wabolekiswa kwiPlatinum Stars, ukhala ngokungabibikho ezinhlelweni zomqeqeshi waMasandawana uPitso Mosimane, nathi yikhona okuholela ekutheni elokhu ebolekiswa undendende.
UNtuli (26), odabuka eCato Ridge, eNtshonalanga yeTheku bekunethemba lokuthi kungenzeka lo mdlali ahlale kwiSundowns ngemuva kokudlala kahle kwiDikwena ngesizini edlule, eyishayela amagoli amqoka.
Komunye umdlalo iDikwena idlala neSundowns uNtuli kwakuthi akayidle ayifele nokwaholela ekutheni uMosimane ngemuva komdlalo aphawule ngaye nokuthi mhlawumbe kuzofanele ambuyise kuMasandawana ngale sizini.
Inkontileka kaNtuli izophela ngo-2019 neSundowns nathi usethemba ukuthi kuyoba yilapho eyothola khona ithuba lokudlalela iqembu eliyobe limdinga.
Exoxa neSolezwe ngeSonto ngesimo sakhe neSundowns uthe useze wakwemukela ukuthi uma kusaqeqesha uMosimane kuleli qembu uyohlale engekho ezinhlelweni zakhe.
“Baphinde bangibolekisa futhi nakule sizini. Uma ungekho ezinhlelweni zomqeqeshi kufanele ukuvumele lokho nokuthi ngifuna ukudlala ibhola. Kwesinye isikhathi uyaye ufikelwe ukuzisola ngokujoyina iqembu. Kodwa uma kukhona iqembu elingidingayo ngoba lizonginika ithuba lokudlala angibinayo inkinga yalokho ngoba engifunayo ukudlala ibhola,” kuchaza uNtuli.
Ebuzwa ukuthi uzokwenzenjani uma kufika isikhathi sokuphela kwenkontileka neSundown uthe kuyoncika ekutheni ngubani umqeqeshi okhona ngaleso sikhathi.
“Ngiyofuna elinye iqembu uma kuwukuthi umqeqeshi akakashintshi ngoba kuyacaca ukuthi kulona okhona angikho ezinhlelweni zakhe,” kusho uNtuli.
Uphinde wazwakalisa ukuphoxeka kwakhe ngokungaphumeleli kwemizamo yokujoyina AmaZulu abezimisele ngokuzodlala kuwona.
“Kuyiqiniso ukuthi AmaZulu abengifuna kanti nami bengithanda ukuwadlalela.
Angazi ukuthi kwenzekani mhlawumbe abezwananga ngemali neSundowns. Kwale ngisho esefuna ukungiboleka kwaphinde akwangalunga.”
Uthi ngokuphela kwesivumelwano ngeke abheke ukuthi yiqembu elinjani elimfunayo ngoba umhlahlandlela kuyoba umbengo obekwe ogqokweni ukuthi ucebe kangakanani.
“Ngeke ngikhethe ukuthi yiliphi iqembu engifuna ukulidlalela kimina yinqobo nje uma libeka okuzongigculisa.”
Lo mdlali ovezwe ebholeni elikhokhelwayo iLamontville Golden Arrows uphinde waveza ukuthi okwenza inkontileka yakhe ingapheli neSundowns kungenxa yesizathu uma umdlali ebolekiswa leyo sizini abolekiswe ngayo kwelinye iqembu, inkontileka iphinde yelulwe ngesizini abebolekiswe ngayo.
“Ngiyethemba ukuthi lokho ngeke kusenzeka ngoba kunesivumelwano phakathi kwemenenja yami neqembu sokuthi kungabe kusenzeka ukuthi kwelekwe ngenye isizini njalo uma kade ngibolekisiwe,” kusho uNtuli.